“နေရာအနှံ့က ထန်းရိပ်ညိုကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » “နေရာအနှံ့က ထန်းရိပ်ညိုကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း”
“နေရာအနှံ့က ထန်းရိပ်ညိုကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Dec 2, 2011 in Local Guides, Photography | 16 comments
ဟိုတစ်လောက ကျောက်ဆည်ဘက်ကိုရောက်တော့ ရှင်ပင်ဆပ်သွားကိုဆက်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
လမ်းဘေးဝဲယာမှာ ရင့်မှည့်စပြုနေတဲ့ကောက်ပင်တွေ မြင်တော့ ဆင်းပြီးဓါတ်ပုံရိုက်ပါတယ်။
လယ်ကွင်းအ၀ါရောင် စိမ်းညို့မှောင်ထန်းပင် သဘာဝရဲ့အလှတွေပါဘဲ။
1 ကျောက်ဆယ် ရှင်ပင်ဆပ်သွားအသွားမှာတွေ့ရတဲ့ ထန်းပင်(လယ်တွင်းကိုးခရိုင်လေ)
2 လမ်းကလေးက ဖြောင့်စင်း လယ်ကွင်းက၀ါဝင်းဝင်း ထန်းပင်လေးတွေက ညိုမှောင်
အဲဒီထန်းပင်တွေမြင်တော့ နေရာအနှံ့မှာတွေ့ဘူးတဲ့ ကိုယ်လက်ဆော့ခဲ့ဘူးတဲ့
3 မြစ်ငယ်ကနေ စစ်ကိုင်းဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာမြင်ရတဲ့ထန်းပင်အုပ်ကလေးပါ။
4 ဒီထန်းပင်လေးတွေကလဲ မြစ်ငယ်ကနေ စစ်ကိုင်းဘက်အသွားလမ်းကလေးမှာရှိတာပါ။
အဲဒီလမ်းတစ်နေရာရောက်ရင် စစ်ကိုင်းတံတားအသစ်က ကုန်းကြီးတွေကို မြင်ရတဲ့နေရာ
5 ဒါကတော့ ကျနော်တို့မန်းလေး တောင်ဘက်ကျုံးက နန်းမြို့ရိုးပေါ်က ထန်းပင်အုပ်ကလေးပါ
ဒီထန်းပင်တွေက နန်းတွင်း အတွင်းဘက်မြို့ရိုးပေါ်မှာပေါက်နေပြီး ကျနော်ထက်အသက်ကြီးပါတယ်။.
6 ပြင်ဦးလွင်ကားလမ်းဘေး စိမ်းစိမ်းထဲက ညိုညို ထန်းပင်ပျို
အုန်းချောကအပြန်မှာ စိမ်းမြနေတဲ့လယ်ကွင်းတွေကြားထဲမှာ အထီးကျန်သလိုမတ်မတ်ကြီးရပ်နေတဲ့ထန်းပင်ကြီးကိုသွားသတိရမိပါတယ်။ သူ့နောက်ဘက်မှာတော့ ဘော်ငွေရောင်တိမ်တိုက်ကြီးကလဲရှိနေပြန်ပါတယ်။ ဒီထန်းပင်လေးက မေမြို့ပန်းဈေးတန်းနဲ့သိပ်မနီးမဝေးနေရာလေး အတက်လမ်းဘက်မှာရှိတာပါ။
လူ့စိတ်ဆိုတာက အခက်သားလားဗျာ။ တစ်ပင်တည်းရှိနေတဲ့ဒီထန်းပင်ပုံမြင်တော့ သူ့လိုဘဲ တစ်
7 ရွှေတိဂုံရင်ပြင်က ထန်းပင်
ပင်ထဲရှိနေတဲ့ထန်းပင်ကို သတိရမိပြန်ရော။ ဒီထန်းပင်လေးက ရန်ကုန် ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်မှာရှိတာပါ။ အဲဒီနေ့က ကျနော်ဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ်ရောက်တာနေ့လည်ပိုင်းနေတွေပူကျက်လို့နေပါတယ်။
8 ကမ္ဘာအေးက ထန်းညီနောင်
ရွှေတိဂုံကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက် ကမ္ဘာအေးစေတီကိုရောက်တာ့ အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းထန်းပင်ညီနောင်လေးကို လက်ဆော့မိတာပါဘဲ။
အဲဒီထန်းပင်ညီနောင်ကိုမြင်တော့ ဒီလိုထန်းပင်ညီနောင်လေးကိုတွေ့ဘူးပါတယ်ဆိုပြန်စဉ်းစားမိတဲ့အခါတောင်မြို့ လို့ကျနော်တို့ခေါ်တဲ့ အမရပူရမြို့ကိုသွားတုံးက လမ်းဘေးမှာရို်က်ထားတဲ့ ပုံလေးကိုသွားသတိရမိပြန်ပါတယ်။ တစ်ပုံကတော့ စက်တင်ဘာလတုံးကရိုက်ထားတာပါ။ နောက်တစ်ပုံကတော့ တောင်သမန်အင်းကို သွားတဲ့လမ်းမှာ နိုဝင်ဘာလထဲမှာရိုက်တာတဲ့ပုံလေး။ နှစ်ပုံလုံးထန်းပင်ညီနောင်နဲ့ပုံ တစ်ပုံကတော့ နဂါးရုံဘုရားနားမှာပါ။
10 တောင်မြို့ နဂါးရုံဘုရားနားက ထန်းညီနောင်
အဲဒီနဂါးရုံဘုရားနားကထန်းပင်မြင်တော့ တစ်ခါမုံရွာဘက်သွားတော့ ကောင်းမူ့တော်မရောက်ခင်လေးမှာ ရှေးဘုရားအိုအိုလေးဘေးက
11 မုံရွာကားလမ်းနံဘေးက တကိုယ်တော် ထန်းပင်ညို
အဲဒီမုံရွာသွားတဲ့နေ့မှာပါဘဲ။ လမ်းဘေးတစ်နေရာမှာ တစ်ပင်ထည်းထီးထီးရပ်နေတဲ့ ထန်းပင်ကြီးကိုမြင်ရပြန်ပါတယ်။ သူ့အောက်မှာတော့ စိုက်ခင်းစိမ်းစိမ်းလေးတွေ။
မုံရွာကထန်းပင်မြင်တော့ မဆီမဆိုင် အင်းဝသွားခဲ့တာကို သတိရပြန်ရော။ အင်းဝက ထန်းပင်ပုံကတော့မှတ်တမ်းလိုသဘောထားပြီး ယူထားလိုက်ရတယ် သိပ်တော့ စိတ်တိုင်းမကျလှဘူး။ ပုံထွက်သိပ်မကောင်းဘူးထင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ရေထဲမှာအရိပ်ကျနေတာလေးကချစ်စရာကောင်းနေပြန်ရော။ မိဘနဲ့သားသမီးလိုပေါ့ဗျာ ကိုယ့်ကလေးလှလှ မလှလှ ချစ်ရသလိုပါဘဲ။
14 လမ်းဆိုးဆိုးလေးထဲကနေ အင်းဝမြို့ထဲအ၀င်တွေ့ရတဲ့ ထန်းပင်အုပ်
15 ဗားကရာကျောင်းနံ့ဘေးက ထန်းပင်
အင်းဝရောက်ပြန်တော့ ဗားကရာကျောင်းတော်ကိုသွားကြတာပေါ့ဗျာ။ ဗားကရာကျောင်းကအပြန်မှာ မြောက်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်မိတော့ ရေအိုင်လေးထဲမှာက ကြာပင်လေးတွေ။ဟိုးအဝေးမှာကတော့ ထန်းပင်ညိုညို။ ဗားကရာကအပြန်မယ်နုအုတ်ကျောင်းကိုသွားမယ်ဆိုတော့ မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုအသွားလမ်းဆိုးဆိုးလေးထဲဝင်ပြန်တော့ ဟိုး အနောက်ဘက်မှာ ရွှေရောင်ဝင်းနေတဲ့ဘုရားဘေးမှာထန်းပင်လေးတွေ့ပြန်ရော။ မြန်မာပြည်မှာထန်းပင်အတော်ပေပါတယ်။ ဗားကရကျောင်းရောက်ပြန်တော့လဲပါတ်ပါတ်လည်မှာထန်းပင်တွေ။
16 ဗားကရာကအပြန်မြေလမ်းလေးဘေးက ရေုအိုင်နဲ့ထန်းပင်
17 ဗားကရာကျောင်းတောင်ဘက်က ထန်းပင်အုပ်အုပ်
18 မန်းလေး တက်သိမ်းအင်းကန်တော်ကြီးက ထန်းပင်
ဒီပုံလေးကတော့ မန်းလေးတက်သိမ်းအင်းကထန်းပင်လေးပါ။ ဒီထန်းပင်လေးကို အချိန်မတူ ရာသီမတူ အမြင်ဒေါင့်မတူဘဲရိုက်ပြထာတဲ့ပုံတွေကို ထပ်ပြီးတင်ပေးမှာပါ။ မြင်ဘူးပြီးသားဆိုရင်တော့ခွင့်လွှတ်ပါနော်။
ကိုပေါက်……….အိမ်ရှေ့မင်း ထန်းပင်အုပ်လေးတို့၊ ရန်ကင်းတောင် ထန်းစုလေးတို့ လည်း ထည့်အုံးလေ။ သူလည်း နာမည်ကြီး ထန်းပင်တွေနော်…………:mrgreen:
(ဘုရားက ထန်းပင်တွေ ပါသလို တောတန်းကြားက ပင်လေးတွေလည်း ပြစ်မထားနဲ့လေ….:D )
ထန်းပင်တွေ ချည်းပဲလား………..မြူအိုးလေးတွေ ၊ ပဲကြီးလှော်၊ မြေကြွက်ကြော် (ပုရစ်ကပြောပြီးတော့) လေးပါရိုက်ပြရင် ………..
mg aoukall says:
ထန်းပင်တွေ ကိုမြင်ရတော့ ကျွန်တော်တို့ရွာ ပတ်ပတ်လည်က ထန်းတောတွေ ကို သတိရလိုက်တာဗျာ…
အင်း……….အခုဆို ရွာမပြန်နိုင်သေးတာ ၅ နှစ်ကျော်ပီ….
ဓါတ်ပုံရှုခင်းတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ ဦးပေါက်ရေ နံပါတ်၅ ပုံကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။
ရွှေတိဂုံရင်ပြင်က ထန်းပင်တောင် ပါအောင်ရိုက်နိုင်တာ ချီးကျူးပါတယ် ကိုပေါက်ရေ။
အဲဒါက ကျနော်ဇူလိုင်လ ရန်ကုန်လာတုန်းက ရိုက်ထားတာလေ
ဟေ့ မကျေနပ်ဘူးဟေ့ … ထန်းပင်ကြပါပြီး ကိုရင်ပုပုံ တစ်ပုံမှ မပါတာ ဘာကြောင့်တုန်း .. သက်သက်ကို ရှောင်ကွင်း ရိုက်သွားတာလား ….။
ဒီလောက် ထန်းပင် များနေတာ တစ်ပုံမဟုတ် တစ်ပုံမှာတော့ ကိုရင်ပု ပါကို ပါရမယ် …
ကိုရင်ပု ပုံပါအောင်ရိုက်မလို့လုပ်တာ အမူးလွန်တော့ မရိုက်ရဲဘူး။
ကိုပေါက်က မြွေပွေးမကြောက်ဖူးလား ဟင် ။
မြွေပွေးပေါမဲ့ ပုံမို့ပါ ။
ကိုပေါက်ရေ..ကျေးလက်ဒေသ မြို့ပြအပါဝင် ထန်းတောအလှက မြင်ရသူတိုင်း စိတ်ဘ၀င်ရွှင်လန်း
ချမ်းမြေ့ ရပါတယ်..ရှာရှာဖွေဖွေ တင်ပြပေးတာလည်း ကျေးဇူးပါနော်..။
ကိုပေါက်… ထန်းပင်တွေ လိုက်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ထန်းရေရော မသောက်ခဲ့ဘူးလား။ ဟုတ်တယ်.. မန်းလေးမှာဆို အိမ်ရှေ့မင်း ထန်းတောရော မပါဘူးလား။။။
ထန်းရည် ပုံ နဲ့ 
တရားခံရှေ့ဆောင်လမ်းပြ မဟာဒူဝံကျယ် ဂ လေးလေးပေါက်ကိုးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး